Tag: inona ny fanapahana fitomboana | Martech Zone
Tag: inona ny hacking amin'ny fitomboana
Ny teny hoe fanapahana dia matetika misy fifandraisana ratsy mifandray aminy satria miresaka momba ny fandefasana programa. Fa na ny olona manao hack hack aza dia tsy manao zavatra tsy ara-dalàna na manimba. Indraindray ny hacking dia vahaolana na hitsin-dàlana. Ny fampiharana ny lojika mitovy amin'ny marketing dia miasa koa. Fanapahana hacking izany. Ny fanapahana fitomboana dia nampiharina tamin'ny fanombohana izay mila fananganana fahatsiarovan-tena sy fananganana zaza… saingy tsy nanana ny tetibola na loharanom-bola hanaovana izany.